နိုဝင်ဘာလ 2018 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: နိုဝင်ဘာလ 2018
နေအိမ် > နိုဝင်ဘာလ 2018
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ 2018 တစ်ခုအဆုံးမှာနီးပါးဖြစ်ပါသည်, သာခရစ်စမတ်နီးသည်ကိုဆိုလိုနိုငျသော! ပြည်သူ့နေဆဲထိုသို့အဆင်သင့်ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ခရီးသွားများအတွက်, ခရီးစဉ်စီစဉ်မှမြင့်မားသောအချိန်ကန့်. သင်၌ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့လက်ျာဘက်မြို့ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်, ကျနော်တို့ရရှိပါသည်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ တစ်ဦးညင်ညင်သာသာရွေ့လျားရထားပေါ်တွင်အိပ်ပျော်ကျသွားနှင့်သင့်လိုရာခရီးမှာနောက်တစ်နေ့နံနက်နှိုးထက်မပိုကောင်းသောခံစားမှုရှိတယ်, တောင်စောင်းကနေမျှသာမိနစ်. ဥရောပမှာ, ရထားနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများကိုရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်မှုအတွက်လုိုအပ်သည်. အဲဒါမဟုတ်ဘူး…
quick လမ်းညွှန်: ပဲရစ် မှစ. Nice ရန်ရထားဖြင့်ခရီးသွားလာ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ပဲရစ်နှင့်နိရထားများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိရောက်သည့်ရထားစနစ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသဖြင့်ပြည်နယ်နှစ်ခုသို့တစ်ချိန်တည်းအလည်အပတ်သွားရန်မှာဘယ်တော့မျှလွယ်ကူမည်မဟုတ်ချေ. နှစ်ပါးခြားနားဒေသများတွင်နှစ်စဉ်ဧည့်သည်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွဲဆောင်. Nice ဟာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော French Riviera ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာတည်ရှိသည်…
ရထားလက်မှတ်တွေတွင်သင့်ငွေကို Save ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပကဒီကမ်ဘာပျေါတှငျအပူဆုံးခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတွေထဲကအဖွစျဖျောပွနိုငျကြောင့်မကြာခဏသင်တို့ပတ်လည်ကျင်လည်ကျက်အဲဒီမှာတစ်ဦးစျေးပေါမှုနှုန်းမှာသင့်ရဲ့ခရီးသွားခံစားနိုင်ကပြောသည်ဖြစ်ပါသည်. ယခုသင်ငွေစုဆောင်းနိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ထုတ်ပြန်ချက်သည်လုံးဝမှန်ကန်သည်…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အမြဲမိသားစုပတ်ပတ်လည်ဆုံလည်အလွန်ရိုးရာအားလပ်ရက်ခဲ့, ကြက်ဆင်, နှင့်ဘောလုံး. သို့သျောလညျး, ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးအလျင်အမြန်ထွက်ခွာခွင့်ကိုသုံးနိုင်သူများထဲမှသူများသည်ကျေးဇူးတင်စကားအတွက်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတွင်ဤနှစ်၏အားလပ်ရက်ရာသီကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားသင့်သည်…
ဂျာမနီမှာတော့ရထားခရီးသွား Amazing Is အဘယ်ကြောင့်
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဂျာမနီမှာကြီးကျယ်သောတောင်တန်းများရှိသည်, အသက်ရှု - ဆည်းပူးကျေးလက်, နှင့်ရထားခရီးသွားစေတဲ့နာမည်ကျော်မြို့ကြီးများတစ် ဦး စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွေ့အကြုံကို. ဘာလင်အပါအဝင်ကြည့်ဖို့အများကြီးအလွနေရာများရှိပါသည်, မြူးနစ်, ဟမ်းဘတ်, Cologne, နှင့် Frankfurt, နှင့်များစွာသောအခြား. ဤရွေ့ကားဟော့စပေါ့နှင့်သေးငယ်မြို့များအားလုံးတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာစနစ်တကျ Hi-Speed ​​ကိုရထားစနစ်ဖြင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည်. ဤ…
5 ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ရထားအားဖြင့်ဥရောပ Explore ရန်အကြောင်းပြချက်များ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ တစ်ခုခုမယုံနိုင်လောက်အောင်တိတ်တဆိတ်ရထားပြတင်းပေါက်ထဲကငေးရှိပါတယ်အကြောင်းကိုကျေပွန်ရဲ့, သငျသညျမထငျမ? ဒါကြောင့်, ရငျးနှီးလုံခြုံရေး frisks အကြောင်းကိုမေ့လျော့, အရည်အဘို့ရှင်းလင်းစွာ Ziplock အိတ်, သုညရဲ့ privacy နဲ့အိမ်သာ-လျော့နည်း busses. ဒီဇင်ဘာလ၌ရထားထက်ဥရောပစူးစမ်းရန်မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်. ဒီမှာပါ…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
ထိပ်တန်း3ကောင်းမွန်သောအစားအသောက်အမှုဆောင်ဥရောပမီးရထား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သင့်ပတ်လည်ကအသံကိုငါကြားရပြီစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ကယုံကြည်သည်ဘယ်တော့မှ. အရသာရထားအစားအစာ၏ဆွေးနွေးပွဲ, အမှန်တရားနှင့်သိပ်မဝေးပါ - သင်သည်သင်၏ရထားညစာတိုင်းကိုအမှန်တကယ်ခံစားနိုင်သည်! ကောင်လေးတွေနဲ့ကောင်မလေးတွေ, ကောင်းသောအစားအစာကိုထမ်းဆောင်ရထားလမ်းတစ် ဦး မဟုတ်ပါ…
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီပွဲတော်များသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်အအေးရာသီ၏အများဆုံး Make. အဆိုပါပွဲတော်များနှင်းလျှောစီးနှင့်စနိုးဘုတ်စီးခြင်းကနေသီချင်းအရာအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်နေ, ပြဇါတ်, ရေခဲပန်းပု, နှင့်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပွဲတော်စစ်ရေးပြ. အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည်5သငျသညျဥရောပတလွှားဖြစ်ပျက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့၏ roundup…
စာဖတ်ချိန်:2မိနစ်များ သငျသညျနော်ဝေသွားရောက်ရှာဖွေနေပါသည်? ဥရောပမှအများစုမှာဧည့်သည်များရထားခရီးသွားတစ်ဦးဇိမ်ခံအပျော်အပါးရှာတွေ့. သငျသညျအဘယျကွောငျ့သိလား? ဤသည်မြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၏နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ရန်သင့်အားယူပြီး. ဒီမှာသင်သိထားသင့်တဲ့အရာအချို့ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ…